Xajka Oo Sanadkan Baaqan Doona - Tilmaan Media
Xajka Oo Sanadkan Baaqan Doona
Dawladda Sucuudiga ayaa waxay ku dhawaaqday in xajka uu sanadkan baaqan doono maadaama dunida weli ay la hardamayso cudurka saf marka ah ee coronavirus. Malaayiin Muslimiin ah ayaa arrintani waxa ay ku noqotay niyad jab maadaama qaar badan oo ka mid ah sanado badan ay ku han weynaayeen in ay maruun soo xajiyaan.
Marka laga soo tago in malaayiin badan ay ka baaqan doonto gudashada faralka xajka ah ayaa sidoo kale waxa ay dawladda Sucuudiga u horseedi doonaa in ay waayaan dhaqaale aad u sarreeya oo ka soo geli jiray xujayda. Saraakiil ka tirsan maamulka arrimaha xajka ayaa sheegay in baajinta xajka ay noqotay arrin laga fursan waayay maadaama weli ay taagan tahay halista cudurka coronavirus, xajkuna uu yahay meel dad badani isugu yimaadaan. Waa markii ugu horaysay ee taariikhda oo gudashada faralka xajka ah uu baaqdo.
In kasta oo dunidu si tartiib tartiib ay noloshii caadiga ah ugu soo noqonayso oo laga yaabo in dalal badani ay dib u oggolaadaan duulimaadyada caalamiga ah, haddana kulamada ballaaran ee sida xajka oo kale ah waxaa looga baqay in ay sii fidiyaan cudurka.
Midowga Yurub Ayaa Soo Jeediyay in Dadka Maraykanka Ka Imanaya Aysan Soo Gelin Dalalkooda
Bankiga Adduunka oo $55 Milyan ugu deeqay Soomaaliya